Maxkamada Ciidamada Oo Xakun Ku Riday 9 Ruux
December 31, 2019 F.G 0
Maxkamadda darajada 1aad ee Ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukunno kala duwan ku ridday 9 eedeysane oo lagu eedeeyay in ay dilal ka geysteen Muqdisho iyo in ay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha Al shabaab Dadka xukunada lagu ridey oo mid ka mid ah waxa ay tahay dumar iyadoo qaar kalana lagu ridey iyagoo maqan. Guddoomiyaha Maxkamadda darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka sida Gaashaale dhexe Xasan Cali Nuur Shuute oo ku dhawaaqay Xukunnada kala duwan oo kala ah ayaa sheegay in Saalim Siciid Maxamed, Maxamed Xaaji Axmed, Axmed Maxamed Haashim oo maxkamadda joogay lagu lagu xukumay dil toogasho ah. Sidoo kale Sharma’arke Cumar Axmed, Axmed Faarax Iidle, C/Raxmaan Sh. Cabdullahi, Ramadaan C/Rixiin Mursal oo maxkamadda ka maqan ayaa lagu xukumay dil toogasho ah. Ugu dambeyntii waxa ay maxkamadu ku xukuntay 15 sano oo xarig ah Faadumo Xuseen Cali Caddaawe oo maxkamadda joogtay halka C/Naasir Axmed C/qaadir oo maxkamadda ka maqan lagu xukumay xabsi daa’in. Eedaysanayaashaan ayaa Maxkamada Ciidanka qalabka sida ku eedaysay dilal qorshayn oo loo gaystay Nabadoono ,Saraakiil Boolis iyo mas’uuliyiin ka tirsan Dowlada Soomaaliya.
Matt Bryden”Dowlada Farmaajo meel kale ayey u weecisay Dhaqalihii loogula dagaali lahaa Al-Shabaab
Madaxa hay’adda cilmi-baarista ee Sahan Research, Matthew Bryden ayaa sheegay in kheyraad badan oo lagu taageero dowladda Soomaaliya, aan loo adeegsan halkii loogu talo-galay ee ahayd in lagula dagaalamo kooxda Al-Shabaab. Bryden oo la hadlay taleefishinka FRANCE24 ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay qarashkii loogu talo-galay dagaalka Shabaab ay u weecisay khilaafyada gudaha, iyo sidii ay awood ugu muquunin lahayd maamul goboleedyada. “Inta badan ciidamadii iyo hay’adihii amniga waxaa lagu daa-gureeyey maamul goboleedyo xulufo la ah dowladda, lamana dagaalamayaan Al-Shabaab – Sidaas darteed dareenka dowladda kuma sii jeedo ka adkaanta Al-Shabaab oo ka dambeysay qaraxan [Ex-Control Afgooye],” ayuu yiri Matt Bryden. Matt Bryden ayaa sheegay in qarashkii dowladda oo dhan uu ku dhammaanayo Muqdisho, Hoteelo lagu seexdo Iyo in maamulada dalka lagu dumiyo sidoo kale waxaa qarashka badan lagu bixiyaa warbaahinta taageerto Madaxweeyne Farmaajo .islamarkaana aan waxba laga gaarsiin gobolladii looga baahnaa taageeradeeda ee dagaalka Al-Shabaab uu ka socdo. “Inta badan Koonfurta Soomaaliya waxaa ka jir gab dhinaca maamulka ah, inkastoona Al-Shabaab aysan wada maamulin dhulkaas, haddana waxay xor u tahay in sida ay doonto [Sii aqri]
Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta xarunta golaha shacabka ku leh kukn wadajir ah si looga baaqsado Shutdown ku yimaada hey’adaha dowladda federaalka taasi oo saameyn ku leh mushaaraadka shaqalaha iyo qoondada miisaaniyadda 2020-ka. Maxaa Loola Jeedaa Shutdown? Haddii uu baarlamaanka federaalka ah anisixin waayo miisaaniyadda ka hor 1-da Janaayo 2020-ka amaba iska diido oo xukuumadda federaalka ah dib ugu celiyo, hey’adaha dowliga ah waxaa ay galayaan “Shutdown”, waxaa shaqo la’aan noqonaya xafiisyo badan oo hey’adaha dowliga ah, waxaa mushaar la’aan noqon-doono shaqaalaha rayidka iyo ciidamada, waxaa ugu daran ciidamada waxaa ka go’i-doonna raashiinka, saadka iyo waxyaabaha kale, waxaana ay wasaaradaha xukuumadda federaalka ah waayi-doonaan qarashkii howlaha lagu socod-siin lahaa ee “running costs”, qarashkan intooda badan 6 bil ayuu horay uga maqnaa. Saameynta ugu weyn, waa baarlamaanka federaalka ah oo fasax geli-doono mushaar la’aan, waxaa intaas dheer macalimiin iyo adeegyo gaar ah saameyn weyn soo gaari-doonto. Xal Ma Jiraa? Haddii kahor caawa aan la ansixin miisaaniyadda 2020-ka, oo dalku galo “shutdown”, waxaa qasab noqoneysa in saddexda bil ee ugu horeysa lagu shaqeeyo miisaaniyaddii 2019-ka, taasi [Sii aqri]
Baarlamaanka Oo Ka hadli doona Maqaamka Muqdisho.
Iyadoo shalay Guddoonka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka uu qabtay mooshin soo jeedin ah oo ku saabsan Maqaamka Caasimadda Muqdisho oo muddo sanado ah aanay caddeyn matalaadeeda maamul ee ku yimaada rabitaanka shacabka. In ka badan 100 Xildhibaan ayaa saxiixay mooshinkan soo jeedinta ah, waxaana horkacayay Xildhibaan C/qaadir Cosoble oo muddooyinkii u dambeeyay u ololeynayay sidii Muqdisho u heli laheyd maqaamkeeda iyo maamul ku yimaada rabitaanka shacabka. Dooda mooshinkan ayaa la filayaa in maalmaha soo socota ka bilaabato Baarlamaanka, iyadoo marka doodda la soo gabagabeeyo uu sharci gaar ah ka soo saari doono labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka. Muqdisho oo ah Caasimadda Soomaaliya ayaa wax matalaad ku laheyn Aqalka Sare, sidoo kale digreeto Madaxweyne ayaa lagu soo magacaabi jiray madaxda maamulkaas. Dadka ka soo jeeda Gobolka Banaadir ayaa dalbanayay in la caddeeyo maqaamka Caasimadda, iyadoo dalka uu ka hana qaaday nidaamka Federaalka, isla markaana Muqdisho ay noqotay meesha kaliya ee maqan mataaladeeda.
Wararkii ugu dambeeyay Dhuusamareeb iyo Guddii loo saaray Shaqaaqadii xalay
Xaalada magaalada Dhuusamareeb ayaa saaka degan, kaddib iska hor imaad kooban oo xalay fiidkii ka dhacday magaalada, taasoo qalqal ku abuurtay dadka deegaanka, iyadoo uu xalay magaalada ku hoyday Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre. Ra’iisul Wasaaraha ayaa kulan degdeg ah la qaatay Laamaha ammaanka iyo Wasiirka Arrimaha Gudaha, isagoo kala hadlay shaqaaqadii dhacday iyo sida ay ku timid. Wararka ayaa sheegaya in Guddi baaritaan ku sameeya shaqaaqadaas loo saaray, waxaana la filayaa in Guddiga isla maanta guda galaan howsha baaritaanka, isla markaana ay tagaan goobta uu iska hor imaadka ka dhacay ee aheyd xarunta INJI. Is rasaaseyntii xalay dhacday ayaa waxaa ku dhaawacmay labo askari iyo qof shacab ah, kuwaasoo la dhigay goobaha caafimaadka magaalada. Mas’uuliyiin ka tirsan Ahlusuna ayaa sheegay in la soo weeraray xarun ay degenaayeen Mas’uuliyiintooda, iyagoo ku doodaya in ujeedka weerarkaas uu ahaa in la waxyeeleeyo xubnaha 20-ka Xildhibaan ee Ahlusuna. Ammaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa si aad ah loo adkeeyay, waxaana wafdiga uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaaraha ay ku howlan yihiin dhameystirka dhismaha maamulka Galmudug, iyadoo ay dhamaatay mudadii loo cayimay in [Sii aqri]
SAWIRO:Madasha Xisbiyada Iyo Guddoomiye Mursal oo Caawa kulmay
December 30, 2019 F.G 0
Madaxda Madasha Xisbiyada Qaran oo uu hoggaaminayo Guddoomiye. Sh. Shariif Sheekh Axmed iyo Madaxweyne hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa caawa kulan casho ah la yeeshay Guddoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya Mudane Mohamed Mursal Sheek Cabdiraxmaan. Guddoomiye Mursal oo madaxda Madasha ku casuumay hoygiisa ayay ka wada hadleen xaaladda dalku marayo iyo dareenka Xisbiyada ku mideysan Madasha ka qabaan amniga oo sii xumaanaya iyo jahwareerka Siyaasadeed ee u dhexeeya Xisbiyada, dowladda iyo maamul goboleedyada dalka. Waa kulankii ugu horeeyey oo ay yeesheen Madaxda Madasha Xisbiyada Qaran iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan,iyada oo Madaxda Madasha ay kulmamo xiriir ah yeelanayeen.
Iskahorimaad hubeysan oo ka dhacay Dhuusamareeb iyo R/Wasaare Kheyre Oo Gaaray
Wararka ka imanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug ayaa sheegaya in goor dhow laga maqlay is rasaaseyn meel ku dhow xarunta Iji ee magaalada Dhuusamareeb. Lama oga israaseyntan cida u dhexeysa hase yeeshee waxaa jira warar sheegaya inuu ka yimid kala shaki ciidamo ka wada tirsan ciidamada amniga magaalada Dhuusamareeb. Illaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay iska horimaadkan,mana jirto illaa hadda cid ka hadashay. Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa gelinkii dambe ee maanta gaaray ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre. Wafdiga Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa waxaa garoonka magaalada Dhuusamareeb kusoo dhaweeyey mas’uuliyiin ka tirsan dowladda federalka iyo Maamul goboleedka Galmudug iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Ra’iisul wasaaraha iyo xubnaha wafdigiisa oo hore dib u dhac ugu yimid sababo la xiriira qaraxii ka dhacay maalmo kahor Ex koontarool Afgoye ee magaalada Muqdisho ayaa lagu wadaa in ay dardar geliyaan qorshaha doorashada maamulka Galmudug. Dowlada federalka ayaa dadaalo xoogan ku bixisay sidii ay u dhici doorashada Galmudug iyadoo hore loo qorsheeyay in bishan sii dhamaanaysa ay dhacdo doorashada ayaa guddiga farsamada doorashada waxa ay qorsheeyeen in [Sii aqri]
Xildhibaan Fiqi “Waxaan Ka Rabnaa Warbixin Saxan He’ayda NISA ee Qaraxii EX Koontarol
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa dhowr su’aal ka keenay warkii ka soo baxay Hey’adda NISA ee ahaa in qaraxii maalin ka hor ka dhacay Muqdisho uu qorsheeyay dal shisheeyey, inkasoo aan la magac dhabin dalka uu yahay Axmed Fiqi oo horay u soo noqday Taliyaha NISA ayaa qoraal uu bartiisa Faceoob soo dhigay ku sheegay inay tahay mid siyaasadeysan iyo loolan ka dhaxeeya dowlado qaar oo aanu qudhiisa carabaabin, balse u muuqatay inuu ugala jeeday Imaaraadka iyo Qatar. Halkan hoose ka akhriso. Warqadda hey’adda NISA ee la yaabku ka muuqdo waxaa iiga soo baxey: 1. In ay siyaasadaysan tahey, loolankii dawladaha qaarkood ka dhexeeyayna dhiigga masaakiinta Soomaalida la rabo in ay isaga aarsadaan, ayadoo soo dhexmaraya hey’adda nabadsugidda. 2. Shabaab In loo cudurdaarayo, lagana leexinayo eedda xasuuqii dhacay. 3. In ciidamada Amniga iyo shacabka Soomaaliyeed cadowgii aragagixada ahaa ee ay ka aargoosan lahaayeen laga weecinayo mid aan ahayna loo tilmaamayo. 4. In dawladdu ay iska leexiso In alshabaab ka awood batey, sidaas awgeedna meel kale iyo dawlado shisheeye dusha laga saaro. Waxaa isweydiin mudan haddii [Sii aqri]
C/raxmaan C/shakuur oo ka hor-yimid warbixintii NISA iyo eedeyn uu u jeediyay
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa ka hor-yimid warkii ay shaacisay Hey’adda Sirdoonka Soomaaliya NISA ee ku saabsanaa in dal shisheeyey uu qorsheeyay qaraxii dadka faraha badan ku dhinteen ee 28-kii bishan ka dhacay Ex Koontarool Afgooye. Jawaab degdeg ah oo bartiisa Facebook ku soo qoray ayuu ku yiri “Ujeedka qoraalkan laga leeyahay ma aha oo keli ah in shacabka lagu marin habaabiyo ama lagu qariyo fashilka hay’adda Nabadsugida, ee wuxuu kaloo ujeedkiisu yahay in argagexisada Alshabaab eeda xasuuqa laga leexiyo. Waxaa la oran karaa tani wadashaqayn Alshabaab way dhaafsiisan tahay..” Siyaasigan ayaa dhowr jeer oo hore ugu eedeeyay NISA iyo Al-Shabaab inay wada shaqeyn ka dhaxeyso. C/raxmaan C/shakuur ayaa la sheegaa inuu ka mid yahay siyaasiyiinta Mucaaradka ee lagu tiriyo inay u janjeeraan dhanka Imaaraadka Carabta, waxaa uu dhowr jeer eedeeyay dowladda Qatar inay faragelin ku heyso arrimaha gudaha Soomaaliya, sidoo kale wuxuu si weyn uga hadlay warbixintii New York Times qortay oo ahaa in Qatar ka dambeysay qarax ka dhacay Boosaaso. Dhinaca kale Agaasimaha NISA Fahad Yaasiin iyo madaxda dowladda Soomaaliya ayaa [Sii aqri]
NISA oo sheegtay in dal Shisheeye uu ku lug lahaa qaraxii Ex Koontarool
Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ayaa qoraal ay goor dhow ku shaacisay barteeda Twitter-ka waxay ku sheegtay in Madaxda dalka ay u gudbiyeen warbixin bilow ah oo ku saabsan qaraxii Sabtidii la soo dhaafay ka dhacay Muqdisho. Qoraalka NISA ayaa lagu sheegay in Madaxda qaranka ay la wadaageen in xasuuqa shacabka Soomaaliyeed loo geystay 28 bishan December uu qorsheyntiisa lahaa dal shisheeye, inkastoo aan la magac dhabin dalkaas. “Waxaan madaxda qaranka ugudbinay, warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in Xasuuqii Shacabka Soomaaliyeed loogu gaystay Muqdisho, 28-Dec-2019, uu qorshayntiisa lahaa Dal shisheeye. Baariitaanka socda si loo dhamaystiro, waxaan la kaashan doonnaa Hay’adaha sirdoonka Caalamka qaarkiis”ayaa lagu yiri warka ka soo baxay NISA. Hase ahaatee goor sii horeysay warbixin lagu daabacay jaraa’id lagu magacaabo Yeni Safak oo laga leeyahay dalka Turkiga waxaa lagu eedeeyay Imaaraadka Carabta inuu ka dambeeyay weerarki ka dhacay Muqdisho Sabtidii uu amarkeeda lahaa Amiir Mohamed Bin Zayed. Halkan hoose ka akhriso warka NISA